के तपाई अश्लिल फिल्म हेर्नुहुन्छ ? होसियार ! तपाईंको लागि घातक हुन सक्छ | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more के तपाई अश्लिल फिल्म हेर्नुहुन्छ ? होसियार ! तपाईंको लागि घातक हुन सक्छ
के तपाई अश्लिल फिल्म हेर्नुहुन्छ ? होसियार ! तपाईंको लागि घातक हुन सक्छ
अशोज १० गते, २०७६ - १३:४९
एजेन्सी । पछिल्लो समय अश्लिल चलचित्र हेर्नेहरुको संख्या बृद्दि हुँदै गइरहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ । तर अश्लिल चलचित्र हेर्नु हानिकारक हुन्छ, यसले जीवनमा ठुलो समस्या निम्त्याउन पनि सक्छ । त्यो तपाईंको लागि घातक हुन सक्छ ।
एक अनुसन्धानका अनुसार जसले पोर्न फिल्मबढी मात्रामा हेर्छन् उनीहरुको जीवनमा रोमान्स कम हुँदै जान्छ । उनीहरुलाई डेट, कसैसँगको भेटघाट र रमाइलोले खासै असर पर्दैन । किन भने उनीहरुले यी सवैमा भन्दा पोर्न हेर्न मै आनन्दको महशुस गर्छन् ।
३ सय ५० पुरुष र ३ सय ३६ महिलामाथि गरिएको यो सोध जर्नल अफ सेक्स रिसर्चमा प्रकाशित भएको थियो । आफूलाई चाहेर पनि पोर्न हेर्न रोक्न सक्नुहुन्न भने तपाईंलाई पोर्नको लत लागेको बुझ्नुपर्ने अनुसन्धानले बताएको छ ।
अनुसन्धान भन्छ, ‘स्थिती त्यतिबेला भयानक बन्ने गर्दछ जब तपाईंलाई पोर्न हेर्नु राम्रो होइन भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि आफूलाई यसबाट टाढा राख्न सक्नुहुन्न । यस्तो स्थितीमा तपाईंको आत्मविश्वास खस्किन थाल्छ । ’
यदि तपाईंलाई पोर्न हेरेपछि हिनताबोधको भावना पैदा हुन्छ र तपाईं तनाव लिनुहुन्छ भने यसको प्रत्यक्ष असर तपाईंको सम्बन्धमा पर्ने गर्दछ । जसले तपाईको जीवन नै ववार्दद हुनसक्छ ।
अशोज १० गते, २०७६ - १३:४९ मा प्रकाशित